Posted by ကို Tranquillus | ဖေဖော်ဝါရီလ 12, 2021 | ရေးသားပါးစပ်ဆက်သွယ်ရေးကျွမ်းကျင်မှု
ဘာသာရပ်မည်သို့ပင်ရှိပါစေစာရေးခြင်းအစီအစဉ်ကိုပြင်ဆင်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကျောင်းပညာရေးတစ်လျှောက်လုံးလေးစားရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောစည်းမျဉ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ယနေ့လူအများစုကဤအဆင့်ကိုလျစ်လျူရှုပြီးအကျိုးဆက်များကိုခံစားကြရသည်။ သိသာထင်ရှားတဲ့ကျနော်တို့ရွေးချယ်မှုတစ်ခုချင်းစီအတွက်တာဝန်ရှိသည်။ ငါအရေးအသားအစီအစဉ်ကို၏မရှိခြင်းမှားယွင်းနေသည်ကိုဘယ်လိုသင်ပြပါလိမ့်မယ်။
ဤအစီအစဉ်သည်သင်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်အကြောင်းအရာနှင့်သက်ဆိုင်သောသတင်းအချက်အလက်အားလုံးကိုစီမံရန်သို့မဟုတ်စုစည်းရန်ကူညီလိမ့်မည်။ သို့သော်သင့်တွင်ဤအချက်အလက်မရှိပါက။ အသင့်တော်ဆုံးရွေးရန်သင်သုတေသနပြုရလိမ့်မည်။ အစီအစဉ်မူကြမ်းရေးဆွဲရန်နောက်လာမည့် သင်၏အကြံအစည်များကိုစည်းလုံးမှုတစ်ခုလုံးသို့ပေါင်းစည်းပေးသောကြောင့်၎င်းသည်အလွန်အရေးကြီးသောခြေလှမ်းဖြစ်သည်။
ယေဘုယျအားဖြင့်အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့်စာသား၏အဓိကအတွေးအခေါ်များကိုဖော်ပြပြီးနောက်တွင်၎င်းတို့ကိုသရုပ်ဖော်ရန်အယူအဆများ၊ ဥပမာများသို့မဟုတ်အချက်အလက်များကိုဖော်ပြသည်။ ထို့ကြောင့်ဝေါဟာရရွေးချယ်မှုအပြင်ဝါကျများ၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကိုစိတ်ပူစရာမလိုပါ။ ဤအဆင့်တွင်၎င်းသည်လာမည့်ရေးသားချက်များ၏အကျဉ်းချုပ်သာဖြစ်သည်။ ဒါကမင်းကိုလွတ်လပ်စွာရေးသားခွင့်ပေးသည်။ သင်၏ရေးသားမှုတွင်သင်တင်ပြမည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုရှာဖွေရန်အာရုံစိုက်ရန်ဤသည်မှာနည်းလမ်းကောင်းဖြစ်သည်။
သတင်းအချက်အလက်အတော်များများကို ဦး စွာကောက်ယူခြင်းမရှိဘဲအရေးအသားသို့မဟုတ်အရေးအသားမရှိပါ။ ဤအဆင့်ကိုယေဘူယျအားဖြင့်အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်းနှင့်နောက်မှလိုက်သောအချက်အလက်ကိုခွဲခြားခြင်းဖြစ်သည်။ အများဆုံးအဆုံးအဖြတ်ပေးသည့်အချက်မှာအဓိကအတွေးအခေါ်များ၊ အလယ်တန်းအတွေးအခေါ်များနှင့်စသည်တို့ဖြစ်သည်။ ဤအရာသည်သင်၏အတွေးများကိုတင်ပြခြင်း၏အစီအစဉ်ကိုရွေးချယ်ရန်၊ စာဖတ်သူအားသင်၏စာကိုနားလည်ရန်နှင့်အခက်အခဲမရှိဖတ်ရန်ကူညီရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
ပထမ ဦး စွာဤစာတမ်းကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေမည့်အကြောင်းအရာ၏အဓိကနေရာတွင်ထားရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ထို့ကြောင့်အောက်ပါမေးခွန်းများကိုမေးခြင်းဖြစ်သည်။ ဘာအကြောင်းရေးသင့်သလဲ ? ဤမေးခွန်းများကိုဖြေဆိုခြင်းသည်ဝါကျတိုတစ်ခုအားဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်၊ ဥပမာအားဖြင့်ဘာသာရပ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးလက်ခံသူထံပေးပို့ရန်စိတ်ကူးကိုယေဘူယျအားဖြင့်ဖော်ပြသောခေါင်းစဉ်ကြီးတစ်ခုကိုဥပမာပေးသည်။
ထို့နောက်သင်သည်သင်၏အတွေးအခေါ်များကိုတစ်စုနှင့်တစ်စုနှင့်တစ်သားတည်းဖြစ်အောင်စီစဉ်ရမည်။ ကျနော့်အမြင်အရမင်းရဲ့တီထွင်ဖန်တီးမှုကိုထုတ်ဖော်ပြသရန်နှင့်အကြောင်းအရာတစ်ခုရဲ့အချက်အလက်အားလုံးကိုစုဆောင်းရန်အကောင်းဆုံးနည်းကတော့ Mind Mapping ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကွဲပြားသောသဘောတရားများကိုပိုမိုတိကျသောအမြင်ရှိရန်ခွင့်ပြုရုံသာမက၎င်းတို့အကြားဆက်နွယ်မှုများကိုလည်းတည်ဆောက်ပေးသည်။ ဤစနစ်ဖြင့်သင်သည်မေးခွန်းတစ်ခုကိုကျော်လွှားနိုင်လိမ့်မည်။
သင့်စာဖတ်သူကိုစိတ် ၀ င်စားမည့်အခြားလိုအပ်သည့်အချက်အလက်များကိုထည့်သွင်းပါ။
ယခုသင်ရွေးချယ်ထားသောအတွေးအခေါ်များကိုစုစည်းရန်လိုအပ်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာပိုမိုတိကျသောသတင်းစကားကိုရရှိရန်အလယ်တန်းအတွေးအခေါ်များကိုဆုံးဖြတ်ရန်။ ဗော်တဲယားသည်သူ၏စာပေတွင် " ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ ", အတည်ပြုခြင်းဖြင့်တူညီသော ဦး တည်ချက်အတွက်သွား:" ပျင်းစရာကောင်းတဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကအရာရာတိုင်းကိုပြောဖို့ပါ " ကျနော်တို့ဒီမှာအောင်မြင်သောအရေးအသားများအတွက်အလွန်ထိရောက်သောလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်အတူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနေကြသည်။
စာရေးသူကဘယ်သူလဲ ? ယင်း၏ရည်ရွယ်ချက်ကားအဘယ်နည်း။
မင်းရဲ့အရေးအသားအတွက်ရည်ရွယ်ထားတဲ့ပစ်မှတ်ကဘယ်သူလဲ ? စာရေးသူနှင့်စပ်လျဉ်း။ စာဖတ်သူ၏ခေါင်းစဉ်သို့မဟုတ်လုပ်ဆောင်ချက်ကဘာလဲ။ စာရေးသူနှင့်သူ၏စာဖတ်သူများအကြားဆက်သွယ်မှုကဘာလဲ။ သူ၏အရေးအသားသည်သူသည်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး အဖြစ်မည်သူမည်ဝါအပေါ်အခြေခံခြင်းလော၊ ၎င်းသည်သူ၏ခေါင်းစဉ်အမည်သို့မဟုတ်သူကိုယ်စားပြုသည့်ကုမ္ပဏီ၏အမည်ပေါ်တွင်အခြေခံပါသလော။ အဘယ်အရာကအလုပ်၏အကြောင်းအရာကိုသူ၏နားလည်မှုကိုအပြစ်လွှတ်? သူဖတ်ရန်အဘယ်ကြောင့်အရေးကြီးသနည်း။
ဘာကြောင့်ရေးရတာလဲ ? စာဖတ်သူကိုသတင်းအချက်အလက်တွေပေးဖို့၊ သူ့ကိုအဖြစ်မှန်တစ်ခုရှိအောင်လုပ်ဖို့၊ သူ့ဆီကနေတုံ့ပြန်မှုတစ်ခုရဖို့အတွက်လား။ စာရေးသူသည်သူ၏စာဖတ်သူများအတွက်ဘာကိုအလိုရှိသနည်း။
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အရေးအသားသည်အထူးသဖြင့်ဆက်သွယ်ရေးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသင်သတိရရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ သင့်ကိုဖတ်မည့်သူသည်အထူးမျှော်လင့်ချက်ရှိလိမ့်မည်။ သို့မဟုတ်သင်ကတောင်းဆိုမှုတစ်ခုအတွက်ရေးရန်သို့မဟုတ်သတ်သတ်မှတ်မှတ်အဖြေတစ်ခုကိုစောင့်နေစဉ်သင်ရေးသားလိမ့်မည်။
အပေါ်အခြေခံပြီးသတင်းစကားကဘာလဲ ? အဘယ်အရာကိုမက်ဆေ့ခ်ျကိုစေသည်?
အရေးအသားကိုအကြောင်းပြတဲ့အထူးအခြေအနေမျိုးရှိပါသလား ? ထို့ကြောင့် နေရာ၊ အခိုက်အတန့်၊ သို့မဟုတ် သတင်းစကား ပေးပို့ရန် အသင့်တော်ဆုံး လုပ်ငန်းစဉ်ကို တိကျစွာ ဆုံးဖြတ်ရန် လိုအပ်သည် (၎င်းမှာ၊ e-mail,အစီရင်ခံစာ၊ စီမံခန့်ခွဲရေးစာ စသည်ဖြင့်)။
အထက်ပါမေးခွန်းများကိုသင်ဖြေဆိုပြီးသောအခါစာရေးခြင်းအစီအစဉ်ကိုသင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ နောက်ဆောင်းပါးများတွင်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရမည့်အတိုင်း၊ တစ်ခုတည်းသောရေးသားခြင်းအစီအစဉ်တစ်ခုမျှသာမဟုတ်ပါ။ ဘယ်ဟာကိုသင်ရေးဖို့စီစဉ်ထားပါစေဆက်သွယ်ရေးရည်မှန်းချက်အားလုံးနီးပါးမှာအစီအစဉ်တစ်ခုရှိနေပါတယ်။ ၎င်းသည်သတင်းအချက်အလက်မျှဝေခြင်း၊ အာရုံစူးစိုက်မှုကိုဆွဲဆောင်ခြင်း၊ အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုယုံကြည်စိတ်ချခြင်း (သို့) တုံ့ပြန်မှုတစ်မျိုးမျိုးကိုထုတ်ယူခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
ဖတ်ရန် ပေးစာပုံစံ - ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသုံးစရိတ်များအတွက်ပြန်လည်ပေးချေရန်တောင်းဆိုခြင်း
သင်၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အရေးအသားတွင်အရေးအသားအစီအစဉ်သည်မည်မျှအရေးကြီးသနည်း။ ဖေဖော်ဝါရီလ 12, 2021Tranquillus
လွန်ခဲ့သော“ သုတေသနက Sprint မဟုတ်ဘူး၊ မာရသွန်ပြေးတာပဲ။ ”
အောက်ပါပရော်ဖက်ရှင်နယ်တန်းတူညီမျှမှုညွှန်းကိန်း၏တွက်ချက်မှု - UES အတွက်တိကျသောအချက်များရှိပါသလား။